Vaovao - Ny famaritana ny savaivon'ny rivet, ny halavany ary ny aperture
Ny famaritana ny savaivony rivet, ny lavany ary ny aperture
Rehefa rivet, raha lehibe loatra ny savaivon'ny rivet, dia sarotra kokoa ny mamorona fikorontanana, mora ny manao deformation metaly. Raha ny mifanohitra amin'izany kosa, raha kely loatra ny savaivon'ny rivet dia tsy ampy ny tanjaky ny rivet ka miteraka fitomboan'ny ny isan'ny rivet sy ny fahasahiranana amin'ny fananganana.
Ny fomba hisafidianana ny savaivon'ny rivet dia mila mahita ny haben'ny aperture an'ny rivet. Amin'ny ankapobeny, ny savaivon'ny rivet dia 0.1-0.2mm lehibe kokoa noho ny savaivon'ny rivet. Raha mihoatra ny 0.2mm io dia mety ho lasa malalaka.
Ny fisafidianana ny savaivon'ny rivet dia mamaritra indrindra amin'ny hatevin'ny lovia sy ny endrika rivet. Ny kalitaon'ny rivet dia mifandray mivantana amin'ny halavan'ny tsoratry ny fantsika. Raha lava loatra ny tsorakazo, dia ho lehibe loatra ny lohan'ny rivet, ary ho mora miondrika ny tsorakao, na izany aza, raha fohy loatra ny tsoratry ny hoho, dia tsy ampy ny habetsahan'ny fikorontanana ary tsy feno ny loha rivet, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny tanjaka sy ny fihenan'ny rivet joint. Ny halavan'ny riveting dia tokony ho faritana arakaraka ny hatevin'ny ampahany mifandray, ny famafana savaivony eo anelanelan'ny lavaky ny fantsika sy ny tsorakazo ary ny fizotran'ny riveting. kajy arakaraka ny raikipohy amin'ny endrika miray rivet, ary ny hatevin'ny lovia amin'ny fikajiana ny savaivon'ny rivet dia tsy maintsy faritana araky ny fitsipika ihany koa.
Ny fampifangaroana ny rivet aperture sy ny rivet dia tokony ho faritana arakaraka ny fomba isan-karazany amin'ny rivet mangatsiaka sy ny rivet mafana. Ny tehin'ny fantsika dia tsy mora sosotra mandritra ny famonoana mangatsiaka. Mba hiantohana ny tanjaky ny fifandraisana, ny savaivon'ny lavaky ny fantsika dia tokony ho eo akaikin'ny tsoratry ny fantsika. Ao anaty riveting mafana, satria mivelatra amin'ny hafanana ny rivet dia mitombo ny plastika ao amin'ny rivet ary mihena ny hamafiny. Mba hanamorana ny kofehy, ny fahasamihafana misy eo amin'ny savaivon'ny lavaky ny hoho sy ny tehin'ny fantsika dia tokony ho somary lehibe kokoa.Ho an'ny takelaka maromaro misy riveting matevina, ny savaivon'ny lavaka fandavahana dia tokony hahena 1-2mm toy ny savaivony mahazatra. Ho an'ny varingarina, ny savaivony lavaka dia tokony hahena L-2mm ​​raha oharina amin'ny savaivony mahazatra alohan'ny hiondrika, mba hahafahana manamboatra ny reaming mifanaraka amin'ny fepetra teknika mandritra ny fivoriambe.
Ny fepetra ara-teknika momba ny lavaka rivet dia misy ny fametrahana mazava tsara ny lavaka rivet, ny mari-pahaizana ary ny kalitaon'ny velarana. mahitsy, ary koa misy ny marimarina ny lavaka eo amin'ny faladian'ny loaka rivet lohan'ny lohan'ny loaka. Ny maha-marina ny lavaka rivet dia maneho indrindra ny fifankahazoana eo anelanelan'ny lavaka rivet, ny fisaka eo anelanelan'ny lavaka fantsika sy ny fisaka eo anelanelan'ny lavaka fantsika sy ny sisin'ny rivet Ny elanelan'ny lavaka rivet, ny elanelana ary ny elanelam-potoana dia tokony ho faritana arakaraka ny masontsivana fampifanarahana rivet amin'ny rivet.
Amin'ny ankapobeny, rehefa tsy mihoatra ny 30mm ny elanelam-potoana misy eo amin'ny loaka, dia ± 1.0mm ny elanelam-potoana, rehefa lehibe kokoa noho ny 30mm ny elanelan'ny fantsika, ny fihenan'ny elanelana dia ± 1.5mm. Amin'ny ankapobeny dia ± 1.0mm. Ny kalitaon'ny haavon'ny lavaka rivet dia manondro indrindra ny fepetra takiana amin'ny faritra ambonin'ny lavaka rivet, ary tsy avela hanana burrs, sisiny sy zorony, fahasimbana sy triatra ny faritry ny lavaka rivet. .